ချောကလက်ဖျော်စက်စက်ရုံ၊ ချောကလက်အဖုံးစက်ပေးသွင်းသူ - LST စက်
ချောကလက် pump နှင့်ပိုက်
ချောကလက်မှို / မှို
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ OEM ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သက်တမ်းကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်
ချောကလက်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များကိုနက်ရှိုင်းစွာပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ချောကလက်ပြုလုပ်သောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချောကလက်ပြုလုပ်သောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးချောကလက်ဘား၊ မြေပဲ၊ ခဲယဉ်းသောသကြားလုံး၊ ဗာဒံသီး၊ စပျစ်သီးပျဉ်စသည်တို့ကိုဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများတွင်တက်ဘလက်နှင့်ဆေးပြားများအတွက်သကြားအကာအရံများကိုထုပ်ပိုးပေးနိုင်သည်။
အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနည်းပညာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးဆက်သုံးဆက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောစက်များကို ဆက်လက်၍ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
ချောကလက်ဖုံးအုပ်ခြင်း / ပိုလန်ဒယ်အိုးစက်သည်ရိုးရာနည်းပညာစက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်များကို coating / polishing pan speed ဖြင့်လှည့်ပတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးအုပ်ခြင်း / အရောင်တင်ခြင်းနှင့်အဓိကမော်တာ, ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း 6kg / batch မှ 120kg / batch အထိရှိသည်။ ဤစက်ကိုချောကလက်များအားပတ် ၀ န်းကျင်၊ oblate၊ ဘဲဥပုံ၊ နေကြာမျိုးစေ့ပုံ၊ ဆလင်ဒါပုံစံစသည်တို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ရန်နှင့်အရောင်တောက်စေခြင်း၊ ထို့အပြင်ချောကလက်များသည်ပွတ်တိုက်ပြီးနောက် ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရာဖြစ်သည်။
အဖြူရောင်ချောကလက်နှင့်အဖြူရောင်များပါ ၀ င်သည့်စင်တာများကိုဖုံးအုပ်ရန်သင့်တော်သောချောကလက်ချောသောအဖုံး / သုတ်ဆေးဖြစ်သည်။ စက်ကိုမြေပဲ၊ ဗာဒံသီး၊ စပျစ်သီးပျဉ်၊ စပါးဆန်လုံးများ၊ ဂျယ်လီသကြားလုံးများ၊ နှင့် Melissa စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ချောကလက်နှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Rotary-drum chocoalte သကြားဓာတ်၊ သုတ်ဆေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် R & D နည်းပညာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုချောကလက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်း၊ ကြည်လင်သောသကြားလုံးဖုံးခြင်းစသည်တို့ကို ၃၆၀ ဒီဂရီလည်ပတ်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း, ချောကလက်, အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်တက်ဘလက်, ဆေးပြား, သကြားလုံး, etc ၏ polishing များအတွက်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို Rotary-drum chocoalte သကြားအပေါ်ယံပိုင်း / polishing စက်၏အလုပ်လုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ Rotary-drum chocoalte သကြားဓာတ်ဖြင့်သုတ်လိမ်းခြယ်သည့်စက်သည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖုံးအုပ်စက်၊ ၃၆၀ ဒီဂရီလည်ပတ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပစ္စည်းတင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Rotary-drum chocoalte သကြားဓာတ်၊ သုတ်စက်၏အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ။
2.Automatic ရည်မှုန်ရေမွှား, မှုန့်မှုန်ရေမွှားကြော်ငြာပါဝါဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး။
3. အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး, ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်စိုထိုင်းဆ။
4. နေရာလွတ်၊ အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။
Belt and Rotary-drum ချောကလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောချောကလက်သို့မဟုတ် polishing စက်သည်ပရိုဂရမ်မျိုးကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက်အတိုင်းအတာကိုထိန်းချုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကြီးမားသည်။ ၎င်းသည်များစွာသောအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးတို့တွင်အသုံးပြုသောပိုလန်အိုးများအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများ
ခါးပတ် - အမျိုးအစားချောကလက်အမှုန့်အဖုံးများနှင့် illustrating စက်
Rotary-drum Chocoalte သကြားအမှုန့်အဖုံးနှင့်ပိုလန်စက်
Chengdu LST သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
qing@lstchocolatemachine.com (မစ္စ Qing Lin)
Email: suzy@lstchocolatemachine.com (Suzy)
0086 13183885536 (မစ္စ Qing Lin)